Isipho seKrisimesi sika-Adobe: Amakhulu eeIimpawu eziHlalwayo eziShukumayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ewe, iAdobe iza kuthi ngesipho esikhulu seKrisimesi Kwaye oku ukusukela ngomhla we-10 ukuya kowe-14 uya kuba nakho ukukhuphela uthotho lweempawu zeKrisimesi simahla. Ewe awuzukuya kufuneka ungene kunye neakhawunti yakho ye-Cloud Cloud. Uya kwikhonkco kunye nokukhuphela.
Uthotho lweempawu zeKrisimesi kunye nemizobo ekwabandakanya oopopayi onokuthi uphilise umboniso kwiiwebhusayithi zakho. Isindululo esipheleleyo esenziwe yiAdobe esifikayo Ngokusebenzisana ne-Iconfinder.
Iiseti ze-Adobe simahla ze icon iiseti zicwangcisiwe kwiphepha le-Weekoficons ukusukela ngomhla we-10 ukuya kowe-14 kuDisemba njengenxalenye yesipho ekuthiwa yiveki yee icon.
Le mifanekiso mikhulu ezimibalabala kunye noopopayi kakuhle kakhulu zezona zizathu zokuba "ujonge" iiwebhusayithi zakho zeKrisimesi ukuze abathengi bakho baphazamise indlela abapholile ngayo.
Oko sicebisa ukuba ukhuphele kuzo zonke, ukusukela ungazisebenzisa nanini na ufuna. Kwaye ngaphezulu xa unazo zombini kwiifomathi ze-SVG kunye nePNG. Ke akukho sizathu sokuma ngephepha lokukhuphela.
Kukule veki yee icon #WeekofIcons apho iingcali zoopopayi zichaza amaqhinga nomsebenzi owenziweyo. Kanjalo ungafikelela kwizifundo yonke imihla. Khumbula ukugqithisa ngale linki.
Ungakwenza njani oko jonga kwii-GIF ekwabelwana ngazoZikumgangatho ophezulu kwaye zikwimifanekiso entle kakhulu yokwenza ezo mifanekiso zijikeleza zivumela ukuba zibekwe nakweyiphi na indawo kwiwebhusayithi yethu.
Musa ukuzisika kwaye ukhuphele yonke into, kuba unamakhulu ee icon ezandleni zazo zonke iintlobo zeemfuno zoyilo kwiwebhusayithi yakho. Njengokwenza ifayile yakho iimodeli zakho zomzekelo kwesi sixhobo esabelana nawe, esinye isibonelelo sewebhu esikumgangatho ophezulu kunye nokubaluleka kokuphepha ukuhamba ngebhokisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iimpawu » Fumana ii icon zeKrisimesi zoopopayi simahla kwi-SVG nakwi-PNG
I-Origami emangalisayo yeCristian Marianciuc kunye neenqwelomoya zakhe ezintle
Xa utata eguqula imizobo yabantwana bakhe ebhalwe yaba yimizekeliso